Fanadinana sy fepetra ara-pahasalamana :: Tazonina ho roa isaky ny dabilio ny isan’ireo mpiadina Bakalôrea • AoRaha
Fanadinana sy fepetra ara-pahasalamana Tazonina ho roa isaky ny dabilio ny isan’ireo mpiadina Bakalôrea
Nifarana, tamin’ny 17 jolay lasa teo, ny fisoratana anarana amin’ny fanadinana Bakalôrea eto amintsika. Mpianatra arivo sy fito alina no nisoratra anarana teto amin’ny faritanin’Antananarivo, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika (Mesupres). Nihena io tarehimarika io raha noharina tamin’ny taon-dasa ka hitazonana ny isan’ny mpiadina isan-dabilio ho roa, na dia eo aza ny tsy maintsy hanajàna an’ireo fepetra arapahasalamana mba hisorohana amin’ny fifindran’ny valanaretina Covid-19.
Momba ny asa fikarakarana ny fanadinana, dia eo ampanomanana ny taratasy fiantsoana ny mpiadina rehetra manerana ny Nosy ny minisitera mpiahy, amin’izao fotoana izao, ka mpiasa vonjimaika an’ arivony no nantsoina hanatevin-daharana amin’izany.
Tsy nisy fiovana ny isan’ireo foibe hanatanterahana ny fanadinana, raha ny eto an-drenivohitra manokana. Mijanona ho telopolo amby zato izany na eo aza ny fametrahana ny elanelana iray metatra, izay tsy maintsy hajaina amin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao.
« Vitsy ny isan’ireo mpiadina nisoratra anarana teto Antananarivo, tamin’ity taona ity, raha oharina tamin’ny taon-dasa. Notazonina ny isan’ireo foibem-panadinana teo aloha ka mpianatra roa isaky ny dabilio no hipetraka amin’izany. Hisy kosa ny fitsapana hafanana mialoha ny hidirana ny ivon-toerana tsirairay », hoy ny minisitra Assoumacou Elia Beatrice.
Tsiahivina fa amin’ny 5 oktobra 2020 no hanomboka ny fanadinana Bakalôrea manerana Nosy. Aorian’ny fizaràna ny taratasy fiantsoana no hisian’ny fifampidinihana eo amin’ny minisitera sy ireo Ivontoeram-pibaikoana momba ny ady amin’ny Covid-19 (CCO), isaky ny faritra mikasika ny andro hanaovana ny adina ara-panatanjahantena.